सेक्स टेक मा नवीनतम - समाचार नियम
सेक्स टेक मा नवीनतम
तपाईंले एउटा अनुप्रयोग संग आफ्नो व्यायाम नियमित आफ्नो ताप बाट सबै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, किन आफ्नो सेक्स जीवन ब्लुटुथ छैन?
शीर्षक यो लेख “यस सप्ताह लागि केही, सर? सेक्स प्रविधी मा नवीनतम” Robina Gibb द्वारा लेखिएको थियो, शनिबार 23 जनवरी मा theguardian.com लागि 2016 13.37 UTC
आजको entrepreneurial पुस्ता सेक्स आविष्कार गरेका छैनन् सक्छ, तर तिनीहरूले ब्लुटुथ-जडान सेक्स खिलौने आविष्कार गरेका छन्.
Robina Gibb जनवरी मा लस एन्जलस यौन स्वास्थ्य एक्सपो scoured, बजार सबैभन्दा नवीन र घनिष्ठ केही यन्त्रहरू पत्ता लगाउन, स्मार्टफोन-नियन्त्रित pelvic तल्ला exercisers गर्न जोडे लागि विद्युतीय stimulators देखि.
यो Piu हस्तमैथुन खेलौना
थप खराब भाइब्रेटर. तस्वीर: गार्जियन लागि एमिली Berl
IMTOY द्वारा, यो स्टाइलिश पुरुषहरु भाइब्रेटर चम्किलो कालो र रातो बाहिरी र एक squidgy रातो सिलिकन भित्री छ. Penises को एक विकल्प को व्यवहार गरिनेछ 30 कम्पन ढाँचाहरू "एक कोमल पुतली हलचल वा ठूलो thump" दिन डिजाइन गर्दै छन् तीन अलग अलग मोटर्स द्वारा बुझाइएको, मार्केटिङ निर्देशक मत्ती Abo गर्न gemäß. यो Piu लागत $199, र अनुप्रयोग समय मा खेल्न डिजाइन वयस्क फिल्म को एक चयन बेच्छ अनुप्रयोग संग समिकरण. Shenzen मा आधारित एक चिनियाँ दृढ स्वामित्वमा रहेको, को Piu सबैभन्दा शानदार र परिष्कृत पुरुष भाइब्रेटर रूपमा touted छ.
यो नोवा भाइब्रेटर
यो नोवा भाइब्रेटर. तस्वीर: गार्जियन लागि एमिली Berl
Tori Parker, हामी-अनुभूति मा व्यापार विकास निर्देशक, कम्पनी नयाँ नोवा भाइब्रेटर बन्द देखाउँछ. एक लचिलो, दुई-pronged भाइब्रेटर, यो हामी-नियन्त्रण अनुप्रयोग पनि साझेदार टाढैबाट उपकरण नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ काम गर्छ. यो ज्ञात छ, पुरानो सेक्स-प्रविधी parlance मा, "Teledildonics" को रूपमा. परिष्कृत रिमोट सेक्स प्ले यो बाक्लो टुक्रा वरिपरि लागि तपाइँको हुन सक्छ $150.
हामी-अनुभूति गरेको जोडे भाइब्रेटर
यो हामी-अनुभूति स्टलको. तस्वीर: गार्जियन लागि एमिली Berl
यो हामी-अनुभूति4प्लस हामी-जडान अनुप्रयोग आउँछ, र के संसारको शीर्ष बिक्री "धारण" दम्पतीको भाइब्रेटर दाबी को नवीनतम स्मार्ट संस्करण हो. क्यानाडा दृढ मानक नवीनता द्वारा निर्मित, को बाङ्गो, Ergonomic डिजाइन एक fleshy रबर प्रति बन्दूक जस्तै केहि देखिन्छ र सेक्स को समयमा महिला द्वारा पहना डिजाइन गरिएको छ. को नोवा जस्तै, यो हामी-अनुभूति4अनुप्रयोगलाई मार्फत टाढैबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कम्पनी पनि helpfully सुझाव तापनि "पास फिट" र "लेकानेखुसीगर्छ-शान्त मोटर्स" यो एक एकल लागि आदर्श बनाउन, बुद्धिमान panty अनुभूति. यो रेशमी बनेको छ, चिकित्सा ग्रेड सिलिकन, गुलाबी मा आउछ, बैजनी र खैरो र को लागि बेच्छ $179.
स्वागत छ क्यालिफोर्निया गर्न: क्रिस्टल बनेको DILDOS
क्रिस्टल dILDOS. तस्वीर: गार्जियन लागि एमिली Berl
यदि इन्टरनेट-जडान उत्तेजना छैन एकदम आफ्नो कुरा हो, तपाईं एक नरमररुपले पलिश छडी वा अन्डा शुद्ध क्रिस्टल बनेको रुचि हुन सक्छ. Chakrubs संस्थापक Vanessa Cuccia क्रिस्टल को निको शक्ति ल्याउन उनको कम्पनी सुरु, वा पत्थर जादू, सेक्स दुनियाँमा गर्न. छनौट भारतीय जेड समावेश, सेतो लोटस र obsidian जो, कम्पनी दावी, आफ्नो आभा मा कुनै पनि नकारात्मक ऊर्जा को प्रयोगकर्ता छुटकारा हुनेछ, र कहीं तिनीहरूले छडी. बाट दायरामा मूल्य $75 गर्न $200.
क्यान्डी - kegels लागि बिजुली मनिटर
यो कैंडी kegel exerciser. तस्वीर: गार्जियन लागि एमिली Berl
यो कैंडी अर्को IMTOY pelvic तल्ला मांसपेशीमा बलियो मदत गर्न महिलाहरु को लागि "व्यक्तिगत प्रशिक्षक" छ. Kegel exercisers एक booming क्षेत्र हो र यस "स्मार्ट" सानो 33mm व्यास एक पाश मा बल cutest को छ. शरमाना-गुलाबी र चिकित्सा ग्रेड सिलिकन बनेको, यसको आन्तरिक दबाब सेन्सर "तनाव डाटा" सङ्कलन गरेको pelvic तल्ला मांसपेशीमा को संकोचन-विज्ञप्ति आन्दोलन बाट र कैंडी स्मार्टफोन अनुप्रयोगमा ब्लुटुथ मार्फत संचार, मा चोटियों एक दबाव मात्रा संग 225. अनुप्रयोग एक प्रेरक जिम प्रशिक्षक को टोन संग "कसरत" को एक श्रृंखला छ. अत्तर एक महंगा बोतल जस्तै प्याकेज, यो बंध्यकरण लागि एक पराबैंगनी ट्रान्समिटर समावेश एक चिकना सेतो भण्डारण मामला मा आउछ. उनि आफ्नो सानो मोटर मा एक पुस्तकालय को कम 40dB परिवेश ध्वनि मिरर छन् भन्न गर्ने चिनियाँ ईन्जिनियरहरु द्वारा बनाइयो, को कैंडी लागत $189.
यो inseminating dildo के देख गरिएको छ
यो Semenette पप उपकरण. तस्वीर: गार्जियन लागि एमिली Berl
पांप क्रांतिकारी Semenette को नवीनतम संस्करण हो, एक सेक्स खेलौना फटना नकल एउटा inseminating उपकरणको रूपमा युगल कि. आविष्कारक स्टेफनी Berman को "टर्की baster" विधि प्रयोग गरेर उनको साथी संग गर्भ धारण गर्न असफल भयो र दुवै सुखद थियो कि एक खेलौना बनाउन चाहन्थे थियो, कार्यात्मक र एक चिकित्सा सहायता जस्तै महसुस गरेनन्. Berman गरेको साझेदार गर्भवती हुँदा पहिलो पटक उनीहरूले यसलाई प्रयोग, त्यो कोष सुरक्षित र उत्पादनको हटाउन सकिने र प्रतिस्थापन टयूबिंग पेटेंट. यो रंग को एक किसिम मा आउछ, एक पट्टा-मा विकल्प छ र को लागि retails $139.95 तीन अलग गर्न सकिने ट्यूब सहित.
Edgeplay गरेको चाबुक. तस्वीर: गार्जियन लागि एमिली Berl
Edgeplay गियर को त्यो घटनाको लागि स्टक आफ्नो चयन तल toned, मखमली paddles र छाला चाबुक को एक भद्र चयन प्रदर्शन गैर-इन्टरनेट-जडान. बल gags को unleashed संस्करण लागि, नैतिक शुद्धता cages र आविष्कारशील ironmongery, को Edgeplay गियर वेबसाइट हेर्न.
34036	0 लेख, प्रजनन समस्या, ग्याजेटहरू, जीवन र शैली, समाचार, Robina Gibb, सेक्स, यौन स्वास्थ्य, प्रविधि, अमेरिकी समाचार
← huawei मेट 8 समिक्षा सबैभन्दा Rewatchable सिनेमा →